Home » သတင်း » မြက်ချိုင့် EDIUS ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့အတူ Ultimate Editing Functions ဘဝမှကယျတငျ
မြက်ချိုင့် EDIUS ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့အတူ Ultimate Editing Functions ဘဝမှကယျတငျ
Montreal - 8: 00 EST မေလ 13, 2019- မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden Brand, today launches the newest version of EDIUS, its versatile and fast nonlinear editing software. With consumer demand for more content onagreater number of devices, broadcasters are under increased pressure to reach ever-widening audiences on tighter budgets. This is why the need for efficient, flexible workflows that are both scalable and future-proof is critical; EDIUS 9.4 fulfills these needs by providing users with faster functionality and more creative features.
နယူး ပိတ်ထားသောစာတန်း (scc/mcc) file import/export/burn:စာတန်း files can now be imported to the timeline separately, applied to the project, and together with the CEA-708/608 caption data can be also exported as scc/mcc files, or burned in to the video as open captions.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း Edius ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor မြက်ချိုင့် မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အမှတ်တံဆိပ် isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော ထုတ်လုပ်မှု SJGolden - ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-13
ယခင်: Magewell တောင်မှပိုမိုသက်သာနယူးNDI®ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ & Models နှင့်အတူ AV စနစ်-over-IP ကိုမှေူပာင်းလဲရေးကို
နောက်တစ်ခု: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အန်ဒီ Birkinshaw အတူ Calrec ကိုထပ်တိုးအရောင်းရောကျ